Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » NASA dia manao fitsapana ho an'ny iraka volana
NASA dia nandrehitra afo tamin'ny sabotsy teo amin'ny sehatra fototra ho an'ny roketa Space Launch System (SLS) an'ny masoivoho izay handefa ny iraka Artemis I ho an'ny Moon. Ny afo mirehitra no andrana farany amin'ny andiany Green Run.
Ny drafitra fitsapana dia niantso ny maotera efatra an'ny roketin'ny RS-25 ho an'ny valo minitra mahery - ny fotoana mitovy handefasana ilay balafomanga eny amin'ny habakabaka aorian'ny fandefasana azy. Vitan'ny ekipa tamim-pahombiazana ny fanisana ary nandrehitra ny maotera, saingy nikatona kely mihoatra ny iray minitra ny motera tao anaty afo mirehitra. Ny ekipa dia manombana ny angon-drakitra mba hamaritana ny antony nahatonga ny fanidiana aloha, ary hamaritra ny lalana mankany aoriana.
Ho an'ny fitsapana, ny 212 metatra dingana fototra niteraka enina 1.6 tapitrisa pounds, raha nijanona tamin'ny B-2 Test Stand tao amin'ny Stennis Space Center an'ny NASA akaikin'ny Bay St. Louis, Mississippi. Ny fitsapana ny afo dia nahitana ny famoahana oksizenina ranon-dra 733,000 XNUMX kilao sy hidrôzenina rano - fitaratra ny fomba fanombohana fanisana - ary ny fandrehitra ireo motera.
"Ny fitsapana ny sabotsy dia dingana iray lehibe mba hahazoana antoka fa ny dingana fototry ny balafomanga SLS dia vonona ho amin'ny iraka Artemis I, ary hitondra ekipa amin'ny iraka ho avy," hoy ny Administrator NASA Jim Bridenstine, izay nanatrika ny fitsapana. "Na dia tsy nirehitra nandritra ny faharetana manontolo aza ireo motera, dia nahomby ny ekipa niasa tamin'ny alàlan'ny fanisana, nandrehitra ireo motera ary nahazo angon-drakitra sarobidy hampahafantatra ny lalanay mankany aloha."
Ny ekipa mpanohana manerana ny fitiliana fitsapana Stennis dia nanome gazy mahery setra tamin'ny fisedrana, nanolotra herinaratra mandeha amin'ny herinaratra rehetra, nanome rano mihoatra ny 330,000 litatra isa-minitra mba hiarovana ny mpandrehitra lelafo fitsapana ary hiantoka ny fahamendrehan'ny rafitra amin'ny dingana fototra, ary angona voasambotra ilaina hanombanana ny zava-bita fototra.
"Ny fahitana ny masinina efatra rehetra nirehitra voalohany nandritra ny fizahan-toetra ifotony dia dingana lehibe ho an'ny ekipa Space Launch System" hoy i John Honeycutt, mpitantana ny fandaharana SLS ao amin'ny Marshall Space Flight Center an'ny NASA any Huntsville, Alabama. "Hodinihinay ny angon-drakitra, ary izay nianarantsika tamin'ny andrana androany dia hanampy anay handamina ny lalana marina handrosoana hanamarinana io dingana vaovao io dia vonona amin'ny sidina ao amin'ny iraka Artemis I."
The Green Run andiam-panandramana dia nanomboka tamin'ny Janoary 2020, rehefa natolotra avy amin'ny NASA's Michoud Assembly Facility any New Orleans ny lampihazo ary napetraka tao amin'ny toeram-pitsapana B-2 tao Stennis. Ny ekipa dia nahavita ny voalohany tamin'ireo fitsapana valo tamin'ny andiany Green Run talohan'ny niorenany tamin'ny volana martsa noho ny areti-mifindra coronavirus. Taorian'ny nanohizana ny asa tamin'ny volana Mey, ny ekipa dia niasa tamin'ny fitsapana sisa tavela tamin'ity andiany ity, ary nijanona tsindraindray ihany koa rehefa nisy tafio-drivotra tropikaly enina na rivo-doza namely ny morontsirak'i Gulf. Ny fanandramana tsirairay natsangana tamin'ny fitsapana teo aloha miaraka amin'ny fitomboan'ny fahasarotana hanombanana ireo rafitra be pitsony amin'ireo dingana, ary ny fitsapana afo mahamay nandrehitra ireo milina efatra no fitsapana farany tao amin'ny andian-dahatsoratra.
"Stennis dia mbola tsy nahita io haavon'ny fahefana io hatramin'ny nanandramana ny dingana Saturn V tamin'ny taona 1960," hoy ny talen'ny Stennis Center Rick Gilbrech. "Stennis no toerana voalohany fampiroboroboana ny balafomanga izay nisedra ny dingana voalohany sy faharoa an'ny Saturn V izay nitondra ny olona nankany amin'ny Volana nandritra ny Fandaharana Apollo, ary ankehitriny, io afo mafana io indrindra no antony anazahanay toetra toy ny manidina sy manidina toy ny andramantsika. Hianarantsika avy amin'ny fanidiana voalohany androany, hamantatra izay fanitsiana raha ilaina ary handroso. ”
Ankoatra ny famakafakana ny angon-drakitra, ny ekipa koa dia hijery ny dingana ifotony sy ireo motera RS-25 efatra alohan'ny hamaritana ireo dingana manaraka. Eo ambanin'ny Artemisy programa, i NASA dia miasa mba hametrahana ny vehivavy voalohany sy ny lehilahy manaraka amin'ny Volana amin'ny 2024. SLS sy ny sambon-danitra Orion izay hitondra astronauts ho amin'ny habakabaka, miaraka amin'ny rafitry ny fipetrahana maha-olona sy ny Gateway amin'ny fihodinana manodidina ny Moon, no hazondamosin'i NASA ho an'ny fikarohana lalina eny amin'ny habakabaka ..
Fampahalalana bebe kokoa tsindrio eto